Sebenadii Daynta Loo Bixin Jiray Dumarka - Xogside-news Xogside
Home WARARKA CAALAMKA Sebenadii Daynta Loo Bixin Jiray Dumarka
Sebenadii Daynta Loo Bixin Jiray Dumarka
Xogside – Sida uu ku qoray buugtiisa qoraaga iyo taariikhyanka Jeemis ayaa cadeeyay in ilaa horaantii qarnigan labataanad 1901, uu Ingiriiska iyo Yurub uu ninku gabadhiisa inuu iibiyo ay ahayd arin loo ogol yahay.
Haddaba Sida buugaagta taarikhada ku qoran sanadkii 1208 ayuu nin hilibka iibiya oo Ingiriis ahi oo deganaa magaalada Hertford uu gabadhiisa usoo bandhigay in laga iibsado. Ninkan ayaa wakhtigaasi ku iibiyay hal ginni iyo koob khamri ah.
Wakhtigaasi Ingiriiska ninka ganacsigiisu ka burburo wuxu siin jiray gabadhiisa ama caruurtiisa iyadoo qiimaha caadiga ahina uu ahaa hal gini iyo koob khamri ah mararka qaarkood ayay dhowr shilin ku biir jireen.
Waxa kale oo iyana yaab ahayd in maxkamadu qofkii dayn lagu yeesho haddii aanu hanti lahayn laakiin uu gabadh leeyahay , laga xaraashi jiray iyadana. Mar danbe ayay Ingriisku sharcigaasi laaleen ka dib markii cabasho badani ka timi dumarkii xuquuqdooda la duudsiyay.
Previous articleFaanka Iyo Mushkuladiisa
Next articleMuhimadda Wakhtiyada Rashinka